Filoha Hery Rajaonarimampianina : « Maro ny tetikasa notohanan’ny Frankofonia teto » -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : « Maro ny tetikasa notohanan’ny Frankofonia teto »
21/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Teny frantsay, tsipi-panohizantsika mba hiaraha-mientana », io no lohahevitra nanamarihana ny andro iraisam-pirenen’ny frankôfônia. Tsy diso anjara tamin’izany isika teto Madagasikara izay nanamarika izany tamin’ny fampirantiana sarin’i Madagasikara sy ny frankôfônia ary ny asa tanana malagasy. Teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha no nanamarihana izany omaly. « Isika rehetra dia manana finiavana mitovy, atambatr’io harena izay itovizantsika, ary hifampizarantsika : ny teny frantsay, ny soatoavin’ireo miteny sy mampiasa ny teny frantsay, tsipi-panohizana mba handraisana andraikitra. Miasa ary tsy mamela olona hafa any aoriana », hoy ny fanambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, sady filoha am-perinasan’ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, nandritra ny fankalazana omaly. Nanotrona izany fankalazana izany ireo filohan’ny andrim-panjakana, ireo masoivohon’ireo firenena mpikambana ao amin’ny OIF, ireo mpisehatra amin’ny Frankôfônia, ary ireo mpianatra.
Nandritra izany ihany koa no nihainoana ny hafatry ny sekretera jeneralin’ny OIF, Michaëlle Jean, izay niantso ny firaisankinan’ireo mponin’ny firenena 84 mpikambana, mba hiara-hientana handresy ireo ratsy sy ny tsy fitoviana eran-tany, hifampizara traikefa, ary ny fanohanana iraisana amin’ireo antony manokana na iraisana. « Ny teny frantsay no mampifandray antsika hiara-hientana. Miara-mientana tsy amin’ahiahy, ary ao anatin’ny fahasahiana sy ny hafaliana, ary amin’ireo sehatr’asa maha-olona. Ny fitantanana demokratika, ny fanabeazana ifotony, ny fanofanana arak’asa sy teknika, ny fampianarana ambony sy ny fikarohana, ny indostria ara-kolontsaina, ny fampahalalam-baovao, ny toe-karena sy ny fandraharahana, ny nomerika sy ny fanavaozana ara-teknolojia, ny fampandrosoana maharitra. Miara-mientana miteny amin’ny feo avo mba hamakiana bantsilana ireo voka-dratsin’ny fanatontoloana, ny tsy fanajana ireo zo sy fahafahana, indrindra amin’ireo vehivavy, ny fanavakavahana, ny fanalam-baraka ary ny fampihorohoroana », araka ny lahatenin’i Michaëlle Jean.
Nankasitraka manokana ny Sekretera Jeneralin’ny OIF ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fahavononany sy ny fahavitrihany isan’andro amin’ny fikarakarana ny sampana, ary ny fanohanany ny OIF amin’ireo sehatr’asa samihafa izay tarihin’i Madagasikara. Nampatsiahivina fa ny fandraisan’i Madagasikara ny andiany faha-16 ny fihaonamben’ny Frankôfônia dia manamafy ny fiverenan’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Izany koa dia nahafahantsika nikarakara ny fihaonana tamin’ireo mpamatsy sy mpampiasa vola ho an’i Madagasikara tany Paris ny fiandohan’ny desambra 2016. Fihaonana izay nandraisan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara izay nametraka fampiasam-bola mitentina 10 miliara Dolara, ka efa azo ampiasaina na efa nampiasaina ny 60%. « Taorian’ny fihaonambe faha-16, afaka milaza isika fa betsaka ny lalana vita.
Maro ireo tetikasa notohanan’ny Frankôfonia teto Madagasikara toa ny fanokafana ny ivon-toerana malagasy ho an’ny fampandrosoana ara-toe-karena sy fampiroboroboana ny orinasa (AMDP) ny fametrahana ilay tetikasa « Incubons » izay nahafahana nanohana ireo tanora mpandraharaha…
« Ny firenentsika dia niantoka ny fametrahana ny politika sy ny paikadin’ny Frankôfônia, nandritra ny fotoana nitantanantsika azy ka anisan’izany ny fanambarana nandritra ny fihaonambe teto Antananarivo sy ny tsoa-kevitra avy amin’izany. Hafaliana ho ahy ny mitanisa finiavana vitsivitsy toa ny fametrahana ny « Observatoire Boutros Boutros-Gali », ny fitakiana notarihin’ny OIF amin’ny fametrahana hery iraisany « G5 Sahel », ary ny fihaonan’ireo vehivavy avy amin’ny frankôfônia tany Bicarets », hoy ny Filoha raha namarana ny lahateniny.
Kardinaly Pietro Parolin : “ AZO IALANA NY FAHANTRANA…”